Isikhululo seenqwelomoya iTweed-New Haven siya eTampa iinqwelomoya kwiAvelo Airlines ngoku
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Isikhululo seenqwelomoya iTweed-New Haven siya eTampa iinqwelomoya kwiAvelo Airlines ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • iindaba • abantu • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Novemba 8, 2021
Inqwelomoya yeAvelo Airlines ihamba kwisikhululo seenqwelomoya iTweed-New Haven (HVN).
I-Avelo Airlines iqalise inkonzo kwisiseko sayo se-East Coast kwi-HVN ngoLwesithathu odlulileyo (ngoNovemba 3) kunye nenqwelomoya yokuqala eya e-Orlando. ITampa Bay yindawo yesithathu kwezintandathu ezidumileyo zaseFlorida iAvelo Airlines esebenza kwiHVN.
Le nkonzo kwinqwelomoya yeBoeing Next Generation 737-700 isebenza ngoMvulo, ngoLwesihlanu nangoMgqibelo.
Inqwelomoya isuka kwi-HVN ngo-2:30 emva kwemini ifika i-TPA ngo-5:25 pm.
Inqwelomoya ebuyayo imka kwi-TPA ngo-6:15 pm ifika e-HVN ngo-9:00 ebusuku.
IAvelo Airlines iya kunyukela kwindawo yayo yesithathu yaseFlorida namhlanje ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya iTweed-New Haven (HVN) - eTampa Bay.
“Siyavuya ukuya kwindawo yesithathu ka-Avelo eFlorida ngale njikalanga,” utshilo uSihlalo we-Avelo kunye ne-CEO u-Andrew Levy. “Senza kube lula kwaye kube lula kubahlali baseMazantsi eConnecticut ukuba bafike eTampa. Ngamaxabiso ethu asezantsi kakhulu entshayelelo, iTampa kunye nezinye iindawo ezintlanu ezishiswe lilanga zaseFlorida ezisetyenziswa nguAvelo ngoku zifikeleleka kakhulu kunangaphambili. ”
Le nkonzo kwinqwelomoya yeBoeing Next Generation 737-700 isebenza ngoMvulo, ngoLwesihlanu nangoMgqibelo. Inqwelomoya isuka e-HVN ngo-2:30 emva kwemini ifika i-TPA ngo-5:25 pm.
“Uhambo lokuqala lwanamhlanje olusingise eTampa Bay sesinye isiganeko esivuyisayo kubudlelwane bethu obukhula ngokukhawuleza no-Avelo apha e-HVN,” utshilo uMlawuli oyiNtloko weSikhululo seenqwelomoya iTweed-New Haven uSean Scanlon. "Amandla apha kwisikhululo seenqwelomoya nakuluntu kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo ebengakholeleki njengoko siqalisa ixesha elitsha nelinamandla kwi-HVN."
IAvelo Airlines inkonzo iqalile ukusuka kwisiseko sayo se-East Coast kwi-HVN ngoLwesithathu odlulileyo (ngoNovemba 3) kunye nenqwelomoya eya e-Orlando. ITampa Bay yindawo yesithathu kwezintandathu ezidumileyo zaseFlorida IAvelo Airlines isebenzela kwi-HVN. Ukongeza kwi-Fort Lauderdale (eyaqala inkonzo ngoLwesihlanu odlulileyo), i-Orlando kunye neTampa Bay, i-Avelo iya kuqala ukubhabha i-Fort Myers, i-Palm Beach kunye ne-Sarasota ngeentsuku kunye neeveki ezizayo.
Phakathi kwezihlwele, imigca emide, ukuhamba okude kunye nokuxinana kwezithuthi ezidityaniswe kwezinye izikhululo zeenqwelomoya ezihlala zihamba ngabahambi baseConnecticut, i-HVN ibonelela ngamava ahlaziyekileyo kunye alula kunye namava kwisikhululo seenqwelomoya. Ukusondela kwe-HVN koohola beendlela ezininzi kunye noololiwe abakhweli kuyenza ibe sesona sikhululo seenqwelomoya sifikeleleka lula saseConnecticut.
I-Avelo yeyokuqala inqwelo moya ukunika iinqwelomoya ezingamisiyo phakathi kweHVN neFlorida. Ukufika kuka-Avelo kwi-HVN kukwaphawula ukwanda okukhulu kwenkonzo kwi-HVN kwiminyaka engaphezu kwama-30. U-Avelo wenza utyalo-mali lwe-1.2 yezigidi zeerandi ukunceda ekuphuculeni nasekuphuculeni amaziko kunye nokusebenza njengenxalenye yeprojekthi ye-100 yezigidi zeerandi kwi-HVN. Ukwandiswa kwesikhululo seenqwelo-moya kuya kubandakanya i-terminal entsha kunye nomgaqo weenqwelo-moya owandisiweyo okhokelwa ngumqhubi wesikhululo seenqwelomoya i-Avports.
Kwiintsuku ezingama-90 ezidlulileyo, u-Avelo uqeshe ngaphezu kwe-85 HVN-based Crewmembers (oko i-airline ibiza abasebenzi bayo), kubandakanywa nabagadi beenqwelo-moya, abaqhubi beenqwelo-moya, abameli benkonzo yabathengi kwisikhululo seenqwelomoya, iindima ezinxulumene nokusebenza, kunye nabaphathi kunye nabaphathi. I-Avelo kunye ne-HVN balindele ukuba ngaphezulu kwe-100 yeengcali zokuhamba ngeenqwelo moya ezisekwe kwisikhululo seenqwelomoya ekupheleni kwalo nyaka.
Amagosa aseBelarusian atyholwa ngobuqhetseba beenqwelomoya kwiNkundla yeFederale yase-US January 21, 2022
Ubuncinci bangama-29 abantu ababhubhileyo kumthandazo wokunyathela eLiberia January 20, 2022
Ubhubhani ngoku uphelile! Ngaba i-FITUR Iqalise UkuCinga kwakhona ngoKhenketho lweHlabathi? January 20, 2022
I-Aruba ibhengeza iimfuno ezintsha zokungena kwabakhenkethi base-US naseCanada January 20, 2022
I-Austria yenza ugonyo lwe-COVID-19 lube sinyanzelo kubo bonke abemi January 20, 2022
Iinqwelomoya eziNtsha ezi-3 eziya eJamaica zisuka eBelgium naseNetherlands ngo-Epreli January 20, 2022
Intshiseko entsha, inkuthazo kunye nokuzibophelela kwi-20th IMEX Frankfurt January 20, 2022
IJamaica kunye neRiphabhlikhi yaseDominican Zomeleza iNtsebenziswano eNtsha yoKhenketho January 20, 2022
Ishishini lezokhenketho lase-US: Imigaqo-nkqubo emitsha efunekayo ukubuyisela imfuno yohambo January 20, 2022
Amazwe amane asemthethweni "uNdlela weLwandle" kwiZiqithi zaseGalapagos January 20, 2022